Bilecik ရထားမတော်တဆမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာပြောဆိုချက်များ! - RayHaber
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး11 Bilecikကြောက်စရာမှ Related Bilecik စွပ်စွဲချက်အတွက်မီးရထားမတော်တဆမှု!
ကြောက်စရာမှ Related Bilecik စွပ်စွဲချက်အတွက်မီးရထားမတော်တဆမှု!
30 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 11 Bilecik, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, အစာရှောင်ခြင်းရထား, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 1
ဝေမျှမယ် CHP Eskişehirစတုရန်းရထားပျက်ကျမှုနောက်ကွယ်မှအများပြည်သူနှင့်အတူသင်္ချိုင်းစွပ်စွဲချက်များ၏ရလဒ်ကိုထိန်းချုပ်လက်ထောက် Utku Çakıröz Bilecik မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းကိုရထားလွဲသွားလမ်းညွှန်များ။
မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ရှိရာဥမင်လိုဏ်ခေါင်းထဲမှာသူကဆောက်လုပ်ရေးÇakırözတစ်ကွေးမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ရှိရာဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအတွင်းမြန်နှုန်းမြင့်ရထားကိုမသုံးသင့်ကြောင်း, လိုင်းကွေးများတွင်ပြောင်းလဲပစ်ရန်လမ်းလည်းမရှိ "ဖွင့်လှစ်ပြီးစီးခဲ့ကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ထို့အပြင်, ဒီအစောပိုင်းကအလုပ်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုအတွက်စက်တွေကိုနောက်ပိုင်းတွင်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းရှိသူ၏နေအလုပ်လုပ်နေရပ်တန့်သိရသောဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏ဆောက်လုပ်ရေး၌ပြစ်မှားမိ။ ကျနော်တို့ဒီမျဉ်းလုံခြုံအခြေခံအဆောက်အအုံမပါဘဲဖွင့်လှစ်ကြောင်းသိမြင်ရကြ၏။ ကျနော်တို့တောင်မှမောင်းနှင်မှုပင်သင်၏အသေသတ်ခြင်းကိုအမှန်စေလွှတ်ခဲ့သည်ဤလိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်အခါကျွန်တော်စွန့်ပစ်ရထားလမ်းနှင့်ယူလုံလောက်သောဘေးကင်းလုံခြုံရေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများများ၏ဘို့အလိုငှါပွောခဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ လူတွေရဲ့ဘဝတွေကို၏မျက်နှာကို ထောက်. အလုံအလောက်ပိုလျှံသည်ယခု, အားလျော့မရသင့်ပါတယ် "ဟုသူကပြောသည်။
သဘောထား, Assembly vehicle နဲ့ shared
ရထားများ၏လွဲသွားEskişehirအတွက် Bilecik Bozüyükရလဒ်တစ်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအင်ဂျင်နီယာများ၏ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေးကိုလမ်းပြ Recep သက်သာစေသောဆေးကိုပေးမျိုးချစ်တပ်မတော် Tunaboylu မိမိတို့၏အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ CHP Eskişehirလက်ထောက် Utku Çakırözနှင့်အတူမျှဝေသင်္ချိုင်းတွင်းကိုအများပြည်သူ၏စွပ်စွဲချက်နောက်ကွယ်မှအနိုင်ရရှိကညီလာခံကြီးပြင်း။
Eskisehir Çakıröz၏အပြောင်းအရွှေ့ "အားလုံးနှစ်ဦးစက်လုပ်သမားအတွေ့အကြုံရှိကလူစိတ်မသာညည်းတွားကြောင်းBozüyükအတွက်မီးရထားမတော်တဆမှုအတွက်သေဆုံးရသူများစက်လုပ်သမား။ မတော်တဆမှုပြီးနောက် ahi အခိုင်အမာခဲ့သညျ။ အဆိုပါစက်ပြင်၏Eskişehirသူငယ်ချင်းကျွန်တော်ဘယ်သူမှဤလူအမှားတွေလုပ်လျစ်လျူရှုပေး၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် railwaymen နှင့်အတူစကားပြော။ လျှပ်စစ်လိုင်းပေါ်တွင်စနစ်၏နိဒါန်းရှေ့တော်၌ထိုလမ်းမပေါ်တွင်တစ်လ၏ကိုယျတှေ့မှတျတမျးနှင့်ကြုံတွေ့ပြဿနာတွေအကြောင်းကိုသတိပေးခဲ့သည်ရှိသည်ဟုသိရသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ကအကြီးအကျယ်ဘာမျှမပါဘူး။ ဤရွေ့ကားစွပ်စွဲချက်ချက်ချင်းအဝတ်မခြုံဘဲနှင့်အများပြည်သူ illuminated ခံရသင့်ပါတယ် "ဟုသူကပြောသည်။
ဗာဟီဒီတောင်းဆိုမှုများ ORDER ခဲ့သည်
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းသင်ျခြိုငျးစွပ်စွဲချက်မတော်တဆမှုÇakırözလွှဲပြောင်းရဲ့ start အချိန်ပေါ်အလုပ်၏ပြီးစီးခဲ့ကြောင်း high-speed ရထားလိုင်းကို:
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသမားရိုးကျလိုင်းများမှတဆင့်ဖြစ်ပါသည်: မြေပြင်အနေအထား၏အကျိုးအပဲ့ဖြစ်ပေါ်အဖြစ်မတော်တဆထိခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ရှိရာဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတစ်ခုကိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှိသမျှသောဆက်သွယ်မှုများကိုဖြတ်သန်းလိုင်းလုပ်သမားရိုးကျလိုင်းများနှင့်လူကြီးလူကောင်းကနေတဆင့်လုပ်နေကြတယ်၏ဖွင့်လှစ်မရနိုငျသောလူသိများသည်။ ကသမားရိုးကျလိုင်းပေါ်ပြုသောအမှုမဖြစ်သင့်ကြောင်းမျဉ်းကွေးဖို့အစာရှောင်ရထားမလိုပါကြောင်းလူတိုင်းအားဖြင့်လူသိများသည်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းကိုဖန်ဆင်း, ငါတို့ထိုအလမ်းများအဆိုပါရထားလမ်းဟာဆိုးရွားအခြေအနေများရှိနေသော်လည်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်တိုးချဲ့ပြောပါရန်ရှိသည်။ မျဉ်းထားခံရသည့်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားထဲမှာ operated မဖြစ်သင့်ရှိရာဒေသ၌ဤကွေးပါ။
ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အချိန်ပေါ်ပြုမိနေပါသည်: ဇူလိုင်လ 25 2014 လေ့လာရေးခရီးသွားအတွက် Eskisehir-အစ္စတန်ဘူလ်မီးရထားလိုင်းအပြည့်အဝပြီးစီးမတိုင်မီဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြသည်။ ဤသည်မှာထိုရက်စွဲကတည်းကပြီးစီးခဲ့မခံခဲ့ရလမ်းများအတွက်အဟောင်းလိုင်းများပေါ်တွင်အချိန်လိုင်းပေါ်တွင်ပြုသောအမှုသည်, အသုံးပြုရပါမည်လမ်းကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ မတော်တဆမှုသူတို့ဟောင်းလိုင်းပေးသောအတွက်ဧရိယာ၌ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဘယ်မှာမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဤသည်နေဆဲလမ်းကျော်တည်ဆောက်ခြင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအတွင်းရှိသစ်တစ်ခုလိုင်းမှပင်ဟောင်း switch သည်ရှိသေး၏။ အကူးအပြောင်းအပိုင်းတစ်ဦးချွန်ထက်သောအကွေးရှိပါသည်။ အရှိန်အဟုန်တစ်ပြောင်းလဲမှုရှိပါတယ်။ မြန်နှုန်းလျှော့ချရန်လိုအပ်ပါသည်။
undeployed ဥရောပရထားထိန်းချုပ်ရေးစနစ်: ထို့အပြင်ရထားထိန်းချုပ်ပေး ERTM system ကိုမရရှိနိုင်ပါ။ ဒီစနစ်လမ်းပေါ်လုပ်တဲ့စက်ခေါင်းအင်ဂျင်နီယာပေါ်မှာရှိသမျှသတင်းအချက်အလက်များသယ်ဆောင်နှင့်အနည်းငယ်ကီလိုမီတာလုပ်နေတာဟာလျှင်မြန်စွာယခုဘယ်မှာကြောင်းသတိပေးလိုက်သည်။ အဆိုပါရည်ရွယ်ချက် ERTM စနစ်ကအင်ဂျင်နီယာ, အမှားအယွင်းများများအတွက်အလားအလာဖယ်ရှားပစ်ရန်ထူထောင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစာရှောင်ရထားအပြေးကြသည်ဟုပြောပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဟာမတူညီတဲ့ကွဲပြားခြားနားသောစနစ်များကိုအသုံးပြုပါ။ အင်ဂျင်နီယာကအချိန်အမြန်နှုန်းကြောင့်ကာလကိုလျှော့ချမပါဘူးဆိုရင်, ဒီစနစ်ကအလိုအလျောက် circuit ကိုဝင်။ ဒါပေမဲ့ဒီမှာ system ကိုစေ့စပ်, အလုပ်မလုပ်ကြောင်းယခုအချိန်တွင်ပါပဲ။
အဆိုပါသတိပေးစက်လုပ်သမားအားဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်: ယခင်ကသူသည်ဤလမ်းအတွင်းမောင်းနှင်မှု ERTM စနစ်များအတွက်အချိန်အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြောင်းသတိပေးခဲ့သည်က activation စနစ်အရသောအခါလိုအပ်သောကြောင်းလူသိများသည်ဟုဆိုသည်။
မျိုးစုံစနစ်များကိုမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားလမ်းကြောင်းများကိုအသုံးပြုကြသည်: Eskişehirဒီလောက်သေးအောင်လုပ်နိုင်တာ system ကိုအသုံးပြုကြသည်ခံရပြီးနောက် Eskisehir ကနေဒီမြန်နှုန်းမြင့်ရထားEskişehirနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်, လက်ျာ ERTM system ပေါ်တွင်ထွက်ပေါက်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ Izmit ပြီးနောက် TMI ဟုခေါ်သည့်စနစ်လည်းမရှိဆိုပါကတူညီသောလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ။
မမြန်ဆန်စွာရထား၏တစ်ခုတည်းသော system ကိုလိုအပ်ချက်: ဒါကြောင့် Eskisehir ကနေအစ္စတန်ဘူလ်3သီးခြားစနစ်များကိုသွားအထိပါပဲ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ၌ဤဘယ်နေရာမှာမဆိုနဲ့တူဘာမျှရှိပါသည်။ မြန်နှုန်းမြင့်ရထားအသုံးပြုခြင်း၏အခွအေနေတစ်ခုတည်းစနစ်ဖြင့် operated ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏မော်တော်ကားအချို့နည်းလမ်းတွေထဲမှာရွာလမ်း, လမ်းကြောင်းမြို့ကြီးများအကြားပေမယ့်အချို့နည်းလမ်းတွေနဲ့ခရီးသွားလာနေသောကြောင့်ထင်ပါသလဲ, ကတ္တရာအချို့လမ်းအတွက်လည်းမရှိ။ ဒါကြောင့်ထိုသို့သောအမှုကိုရှိသည်ဖို့ဖြစ်နိုင်မလား?
အာဏာရÇakırözလွန်သွားပြီးသောနှစ်စဉ်ထောက်ပံ့ကြေးဆောင်အဆုံးသတ်၏မျက်နှာကို ထောက်. ပြသနိုင်ဖို့အထူးသဖြင့်မကြာသေးခင်ကသမိုင်းအတွက်ရွေးကောက်ပွဲအချိန်ကဖြစ်ပါတယ် "ဟုလိုင်းပေါ်တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားအပြည့်အဝကဤသဘောပေါက်ခဲ့သည်။ အာဏာရရွက်၏လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိသမျှလိုအပ်သောအလုပ်ပြီးအောင်မှလျင်မြန်စွာအချိန်လိုက်ခြင်းသည်။ အခုတော့အဆုံးသတ်ရပါမည်။ ပိုလျှံအန္တရာယ်ကလူတွေရဲ့ဘဝတွေကို၏မျက်နှာကို ထောက်. ယူလိမ့်ရပါမယ် "ဟုသူကပြောသည်။
Control ဘယျအရာ FREQUENCY အတွက်ပြီးပြီလား
Çakırözစည်းဝေးပွဲသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အစီအစဉ်တင်ဆောင်ခဲ့ခြင်းနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဝန်ကြီး Cahit Turan ဝယ်လိုအားနှင့်အတူပြန်ဖြေခံရဖို့မေးခွန်းများကိုတစ်မဲကိုပေးတော်မူ၏။
"လမ်းမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်နှင့်ခေါငျးဥရောပရထားထိန်းချုပ်ရေးစနစ်ရှိပါသလား: ဝန်ကြီးများအောက်ပါမေးခွန်းများကိုÇakıröz Cahit ဖြေဆိုဖို့တောင်းခဲ့ကြသလဲ မတော်တဆကြောင့်စစ်မှန်တဲ့ချက်ချင်းဤစနစ်၏နိဒါန်းကြောင့်လား? တူရကီ - ကပြုပုံကိုမကြာခဏအပေါ်အစ္စတန်ဘူလ်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းကိုစစ်ဆေးမှုများ။ အဆိုပါမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားလမ်းကြောင်းအချို့ကိုအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ကဒီလမ်းအတွက်အသုံးပြုကြသည်, ဒါကြောင့်အဘယ်ကြောင့်သူလုပျခဲ့သလဲ စေလွှတ်လုပ်တဲ့စက်ခေါင်း၏လည်ပတ်လမ်းပြနိုင်ရန်အတွက်ရှေ့ဆက်လမ်းကိုစစ်ဆေးနေပြီးနောက်, ငါတို့သည်မတော်တဆမှုကြံ့ခိုင်နောက်ထပ်ညွှန်ပြချက်မျှော်လင့်ထားခရီးသည်နှင့်အတူခရီးသည်ရထားသူတို့ရဲ့အချိန်ထိုသို့သောအန္တရာယ်များ၏အစအဦးဖြစ်ဆက်လက်? "
30 America မှာကြောက်မက်ဘွယ်သောရထားမတော်တဆမှု (ဗီဒီယို) ဦးဒဏ်ရာရ 25 / 02 / 2015 ကြောက်မက်ဘွယ်သောအမရေိ 30 ရထားပျက်ကျမှုဦးဒဏ်ရာရ: အမေရိကန်ကယ်လီဖိုးနီးယားရထားပျက်ကျမှုအနည်းဆုံး 30 ကလူသည်ပြည်နယ်အတွင်းရှိဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ Ventura ၏မီးဌာနထံမှလက်ခံရရှိသတင်းအချက်အလက်များအဆိုအရ 05.40 110 Oxnard အကြောင်းကိုအတွက်နိုင်ရန်အတွက်အနောက်မြောက်ဘက် Los Angeles မြို့၏ကီလိုမီတာဖြစ်ရပ်ရဲ့ဒေသစံတော်ချိန်မြို့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အရာရှိများက Metrolink ခရီးသည်တင်မီးရထား၏ Los Angeles မြို့ဦးတည်ချက်ကသူ့နည်းလမ်းရထားလမ်းအပေါ်ရပ်ထားထရပ်ကားသို့ပျက်ကျခဲ့ 51 စုစုပေါင်းအဆိုပါရထားလမ်းကနေသူ့ရဲ့ထွက်ပေါက်ကြေငြာလိုက်သည်။ ခရီးသည်တင်ကားများအနေဖြင့်ပထမဦးဆုံးရှင်းပြချက်အနည်းဆုံး330 အဆိုအရပြိုလဲတတ်ဒဏ်ရာရအတွင်းတည်ရှိသောသံလမ်းချွတ်လာကြ၏။ အဆိုပါဒဏ်ရာရခရိုင်ဆေးရုံများတွင်ကုသလျက်ရှိခဲ့ကြသည်။ မတော်တဆမှုအကြောင်းမရှိစေအဆိုပါထရပ်ကားဟာအပုဒ်ပေါ်မှာရှာတွေ့ခဲ့သည် ...
မက္ကစီကိုကြောက်မက်ဘွယ်သောရထားမတော်တဆမှု (ဗီဒီယို) 12 / 05 / 2015 မက္ကစီကိုရထားမတော်တဆမှုအတွက်မက္ကစီကိုကြောက်မက်ဘွယ်သောရထားမတော်တဆမှု 12 လူတွေဒဏ်ရာရ, စက်လုပ်သမားသူတို့ဘဝဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ မက္ကစီကိုစီးတီးရှိရထားဂိတ်များအခြားမီးရထားဘူတာရုံဝင်တိုက်ခဲ့သည်။ စက်လုပ်သမားမနေ့ကကပ်ဘေးဆိုင်ရာမတော်တဆကြုံတွေ့အခင်းဖြစ်ပွားရာမှာသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ 12 ဒဏ်ရာရခရီးသည်အတွက်ဆေးရုံပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ခံခဲ့သည်။ အဆိုပါစံချိန်ဘူတာလုံခြုံရေးကင်မရာများမှ reverberates အရာရှိများကမတော်တဆမှုတစ်ခုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
သေလွန်သောသူတို့သည်နှင့်ရှိတယ်အီတလီမှာကြောက်မက်ဘွယ်သောရထားမတော်တဆမှုဒဏ်ရာရ 25 / 01 / 2018 မီလန်, အီတလီ, မြို့အနီးခရီးသည်ရထား, အရထားလမ်းထဲကဖြုတ်ချ။ လူနှစ်ဦးမတော်တဆမှုသေဆုံးခဲ့ဘယ်မှာရှိဒဏ်ရာရ 10 100 သည်အထိလေးလေးနက်နက်ဖြစ်ဖို့ဖော်ပြထားသည်။ အဆိုပါမတော်တဆမှု Seggiano di Pioltello ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မီလန်ထံမှဗင်းနစ်သွားသည့်ရွေ့လျားနေသည့်ရထားထံမှ Cremona ။ အခင်းဖြစ်ပွားရာမှာမီးအင်ဂျင်နှင့်သူနာပြုကားများသည်တစ်ဦးကြီးများအရေအတွက်စေလွှတ်ခဲ့သည်။ အရာရှိများ Pioltella လွဲချော်ရပ်တန့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဝေးကီလိုမီတာ Milano 40 တွင်တည်ရှိသည်လေ့ကျင့်။ ဒေသခံသတင်းရပ်ကွက်များက 100 ဒဏ်ရာရထက်ပိုမိုနှင့်ဆေးရုံသို့ပို့ဆောင် 10 ၏ပြင်းထန်ပြည်နယ်ဒဏ်ရာရရှိသည်ဟုသဘောဆောငျဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာပိုင်များသူတို့ Twitter ပေါ်တွင်ဖန်ဆင်းတဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာမီးရထားပေါ်တဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအမှားကြေညာခဲ့သည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အတွက်ကြောက်မက်ဘွယ်သောရထားမတော်တဆမှု (ဗီဒီယို) 26 / 03 / 2013 သေနတ်ပုံရိပ်တွေအတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အတွက်ကြောက်မက်ဘွယ်သောရထားမတော်တဆမှုမှာတံတားပေါ်မတ်တပ်ရပ်, ရထားစီးသတိထားမိနှင့်ရထား၏ဦးခေါင်းကိုတံတားအောက်မှဖြတ်သန်းပါဘူးသူကောင်လေးဆင်းကျရောက်ဆိုးဆိုးရွားရွားတံတားနှိပ်ပါ။ ရေအလွန်ထူထပ်သည့်လမ်းကြောင်း၏ဘေးထွက်ချွတ်လဲကျနေတဲ့ခရီးသည်တင်ရထားတံတားပေါ်ခရီးသွားလာခရီးသည်ကိုနှိပ်ပါ။ ရထားပေါ်တွင်ခရီးသွားခရီးသည်များကတံတားအောက်မှာEğilmeyinအသက်တာ၌ဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်သတင်းပို့ခဲ့သည်။ ငါရထားပေါ်တွင်ခရီးသွားနေစဉ်အနိမ့်အတွက်, 18 ငယ်ရွယ်လူစုရာအရပ်ကိုယူအလုပ်အင်တာဗျူးမှဦးဆောင်ပါဝါ 461 paramilis ခေါ်ဆောင်သွားပေမယ်ကြောင့်၎င်းတို့၏နေအိမ်များမှပြန်လာသောဝယ်ယူမှု၏ရွှေ့ဆိုင်းဖို့ပါလိမ့်မည်အိန္ဒိယတွင် Uttar Pradesh ပြည်နယ်၏ပြည်နယ်အတွက်အိန္ဒိယတွင် 18 လူတွေဘဝဆုံးရှုံးခဲ့ ...
ကြောက်မက်ဘွယ်သောကေဘယ်လ်ကားမတော်တဆမှု 20 / 04 / 2012 Rize, ကေဘယ်လ်ကား cable ကိုကားဖြင့် Trabzon ခြမ်းသူမ၏သားကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ခံ၏ရလဒ်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ဖို့ cable ကိုကားတစ်စီးပေါ်မှာဆွဲထားနှင့်တကွ, ပျောက်ကွယ်သွား၏ပြောင်းပြန်လည်ပတ်ပေါ်မှာဘိုးဘေးတို့ဖြတ်ကူးဖို့ကြိုးစားနေမြစ်ထဲသို့ကျဆင်းခဲ့သည်။ ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, အဖေ, (46) ၏အလီ Vapurc, ချောင်းကိုဖြတ်ပြီးသွား 11 နှစ်အရွယ်သား, Rize ၏İyidereခရိုင်İyidere cable ကိုကားတစ်စီးအဖြစ် 23.30 မှာနောက်ဆုံးညဥ့်နှင့်အတူ Ahmet Vapurc Kalecik နေရာဒေသသို့ရောက်ကြ၏။ cable ကိုကားတစ်စီးရောက်ရန်ကြိုးစားနေစဉ်ကဒီမှာ မှစ. , ကေဘယ်လ်ကား Trabzon ရဲ့Pınaraltနေရာဒေသအမျိုးမျိုး၏ဖခင်နှင့်သားမြို့စီးသည့်နှင်းလျှောစီးဓာတ်လှေကားİyidere Creek အဘိဓါန်အပေါ်တစ်ဦးအချိန်ကပြောင်းပြန်ခဲ့သည်။ သူ့သား Ahmed က Vapurc cable ကိုကားတစ်စီးပေါ်မှာဆွဲထားနေစဉ်ပျောက်သွားသောသူအလီ Baba Vapurc, မြစ်ထဲသို့ကျဆင်းခဲ့သည်။ ...
တရုတ်နိုင်ငံတွင်တစ်ခုမှာအချိန်အတွက် Completed အရှည်ဆုံးရထားန်ဆောင်မှုများ Input
ပြီးနောက်သင် Utku မာစတာအကြောင်းပြောဆိုမှားနေ TCDD မှ General Manager ခေါင်းစဉ်မှသတင်းအချက်အလက်ရရှိသည်။ TCDD တည်ငြိမ်အလုပ်ရွှံ့စေမည် yapar.muhalefet
30 America မှာကြောက်မက်ဘွယ်သောရထားမတော်တဆမှု (ဗီဒီယို) ဦးဒဏ်ရာရ
Bakirkoy Metrobus မတော်တဆ (ဗီဒီယို) မြားတှငျပျေါလှငျကြောက်မက်ဘွယ်သောသူပုံများ
UBR Related ထုတ်ဖော်အဆိုပါ UKOME ဆုံးဖြတ်ချက်ဖို့ယဉ်ထံမှလက်ခံရရှိ
Mersin အတွက်ရထားမတော်တဆနေဖြင့်ဖွင့်လှစ် Related မှုများ
အဆိုပါ Izmir ထံမှ secluded ရထားမတော်တဆမှု၏ဖော်ပြချက်